Cygnus-X1, tabilao misy loharano misokatra ho an'ny fifehezana balafomanga an-trano | Avy amin'ny Linux
Cygnus-X1, tabilao misy loharano misokatra ho an'ny fifehezana balafomanga ao an-trano
Heveriko famaro amintsika no manonofy amin'ny maha zanaka manana indray andro any ny tombontsoa afaka manana na manidina balafomanga vita an-trano na sambo kely namboarina hisidina ary ambonin'izany rehetra izany dia manana baiko izay afaka manome antsika fahalalahana hitarika azy araka izay itiavany azy.
Androany, toa izany dia efa nahatanteraka izany nofy izany ny maro Eny, misy maodely ara-barotra vitsivitsy azonao vidiana na koa raha sendra drôna, izay zavatra mitovy amin'ny zavatra tadiavintsika fony mbola zaza.
fa andeha ho marin-toetra isika, maro amintsika no mety ho tia namolavola ilay fitaovana amin'ny tanantsika ary ambonin'ny hery rehetra hianarana ny fomba fanangonana azy sy ny fomba fiasan'ny ampahany tsirairay.
Ary tsara androany aho tonga hizara vaovao Hitako tao amin'ny Internet ny momba ny zavatra mitovy amin'ilay faritako ary izany dia ny tetikasa Cygnus-X1 dia mamorona tabilao misy loharano misokatra ho an'ny maotera jet thrust fanaraha-maso sy rafitra on-board mifandraika amin'izany.
Mpankafy azon'izy ireo ampiasaina ny takelaka hampiorenana ny sidina balafomanga vita an-trano ary ambonin'izany rehetra izany ary ny zava-dehibe indrindra amin'ity tetikasa ity dia ny fizarana ireo fivoaran'ny tetikasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana GPLv3.
Azontsika atao ny mahita sary marobe, famolavolana PCB ary famaritana ho an'ny EasyEDA (Electronic Design Automation) simulator.
Endri-javatra iray hafa miavaka amin'ny tetikasa dia ny tabilao dia mifanaraka tanteraka amin'ny tontolo iainana fampandrosoana Arduino IDE sy Platformio.
Ho fanampin'ny zava-misy fa ny singa rindrambaiko dia voasoratra ao amin'ny C ++ ary ho toy ny fototra, ampiasaina ny microcontroller SAMD51, izay Miasa amin'ny haavo 120 MHz izy ary manana fahatsiarovan-tena Flash 1 MB.
Ny karatra Flash na SD ivelany dia azo ampiasaina hanoratana telemetry mandritra ny sidina. Ny data sy ny baiko dia ampitaina amin'ny alàlan'ny Bluetooth Low Energy (BLE), izay ahafahanao mampiasa smartphone mahazatra ho an'ny fifehezana.
Fantsona telo fanaraha-maso servo no omena: roa ho an'ny fivezivezin'ny noza rehefa miova ny voro-drindrina ary ny iray ho an'ny rafitra hafa, ohatra, hampavitrika ny fametrahana ny parasyute. Misy ihany koa ny pyrochannels roa ho an'ny plugins sy glow plug ary fantsona fanaraha-maso moto elektrika hanovana ny coil amin'ny alàlan'ny gyro.
Ny batterie 2S na 3S LiPo dia azo ampiasaina ho loharanon-kery. Anisan'ireo sensor izay ampiasaina dia ny accelerometer-gyro (IMU BOSCH BMI088) mitambatra ary ny altimeter (MS560702). Ny mpampifandray UART sy I2C dia misy afaka mampifandray sensor fanampiny toy ny maody GPS.
Amin'ireo toetra mampiavaka ny tetikasa dia ireto manaraka ireto no voalaza:
Miorina amin'ny microcontroller SAMD51 mandeha amin'ny 120 MHz miaraka amin'ny flash 1 MB. (ATSAMD51J20A-MUT).
Voafehin'ny Bluetooth Low Energy (BLE), izany dia mamela ny angon-drakitra halefa sy horaisina eo anelanelan'ny roketa sy ny smartphone.
Fantsona Servo 3 (Ny roa amin'ireo fantsona dia ampiasaina amin'ny famoahana voro-by ary ny iray ho an'ny zavatra hafa toy ny rafitra fanesorana parachute mekanika).
Fantsona Pyro 2 afaka mampirehitra ireo mpamily motera sy tariby nichrome. PWM voafehy tanteraka amin'ny fanaraha-maso ankehitriny.
1 DC môtô mpanara-maso mandritra ireo fotoana izay ilanao fanaraha-maso mihodina amin'ny kodiarana fanehoan-kevitra.
Izy io dia miasa amin'ny batterie LIPO 2S sy 3S. 3S aleony (11,1V)
Izy io dia misy terminal fiadiana mba hisorohana ny tsy fahombiazan'ny fantsom-pyrotechnic.
Enina-axis IMU (BOSCH BMI088) sy altimeter (MS560702)
Seranan-tsambo SD mba hahafahanao mitahiry ny angon-drakitrao.
16MB fitehirizana tselatra ivelany. Tehirizo ny angona mandritra ny sidina (mety ho vetivety ny fifandraisana amin'ny karatra SD mandritra ny sidina noho ny hovitrovitra)
Buzzer sy RGB Neopixel LEDs
Fifandraisana UART sy I2C fanampiny raha te hampifandray ireo sensor ivelany toy ny modely GPS ianao.
Farany, raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao ny tetikasa azonao atao ny mijery ny antsipiriany, ny boky fampianarana ary ny sary Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Cygnus-X1, tabilao misy loharano misokatra ho an'ny fifehezana balafomanga ao an-trano
Ndao Encrypt hamaha ny olan'ny fanamarinana amin'ny fitaovana Android taloha